Reserve. Kuyini endaweni evikeleke? Kancane mayelana ezithakazelisayo nemvelo reserves
Ingabe wonke umuntu ukwazi incazelo yegama "reserve"? Kuyini endaweni evikeleke? Ngakho, Nature Reserve - endaweni ehlukile ezweni, okuyinto ivikelwe isimo e esimweni sayo sendalo. Lokhu kwenziwa ukuze kuvikelwe izimila nezilwane kusukela ethonyeni elilimazayo yomuntu. Okubekiwe, amapaki - konke emangalisayo, futhi kufanele kube okuningi!
Ake Umhlaba sberezhom ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo!
Wonke umuntu uyazi ukuthi iplanethi yethu ngempela usengozini enkulu, futhi ngaphambi kokuba kwakusijabulisa kanjani lokho! Kuyinto edabukisayo ukuqaphela, kodwa kuyiqiniso. Akwaziwa ukuthi angabona abazukulu bethu nawe nje evamile ngathi izinyoni ezifana, isibonelo, kanogolantethe noma crane. Ukuze ngandlela-thile ukuvikela imvelo, futhi kwakha Reserve. Uyini lynx, siyazi sibonga ukuvikelwa okukhethekile, kukhona ngaphansi okuyinto isilwane. Uma endaweni lapho uhlala khona, akukho wokugodla ukudaleka, ngabe kade sezishabalele.
Khumbula ukuthi konke kuncike kithi kuphela! Kumelwe senze konke okusemandleni ethu ukulondoloza imvelo, ngoba uma ushona izilwane zifa nabantu, konke kuhlobene. Indawo eyingqayizivele, lapho kusenabantu ngokuphelele ukukhahlamezeka kwendawo yemvelo kwabamele kokubili yezimila nezilwane ezihlukahlukene - inqolobane nemvelo. Kuyini ekusakazeni lizwakalise, siyazi ngenxa yokuthi ngaphansi kwesivikelo kungukuthi kuphela izidalwa kodwa futhi emifuleni, ezilwandle, izilwandle, izintaba ophilayo, nokunye. D.
It yadalwa ngo-1973. Esiqiwini ihlanganisa cishe lonke ugu Wik eCrimea enhle, ¾ sonke insimu yalo kuhlala amahlathi. I wokugodla egandayiwe imvelo umzila, okwakuwuphawu igama kumnandi - Solar. Ubude bayo 7 km. On emaceleni ale ntaba sikhule inqwaba izihlahla ehlathini. Lokhu kungenxa kakhulu zikaphayini, futhi uzokwazi ukuhlangabezana futhi amahlathi lezihlahla ehlanganisa oki nezinye izinhlobo beech.
Lokhu wokugodla etholakala eduze abadumile Nikitsky Botanical Garden. Uma kuqhathaniswa nomakhelwane balo, mncane kakhulu, amahektha 240 kuphela. Naye wanikelwa yavula in 1973. Injongo eyinhloko yale wokugodla sokulondoloza leli isiqeshana ubunjalo iMedithera.
Ngaphansi kwesivikelo olukhethekile esifuze ihlathi iyingqayizivele ngempela. Kuyo kukhona abangaba ngu-500 zezihlahla ezingavamile iMedithera. Kuphinde futhi kube eyodwa kuphela kulo lonke baseMpumalanga Yurophu broadleaf siluhlaza sitrobheli esihlahleni.
Yini Askania Nova kuqhathaniswa kuye! Ungomunye omdala kule nhlonhlo. It yasungulwa emuva esikhathini sangaphambi impi, okungukuthi, ngo-1928. Akhiwe ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi nhlonhlo.
Ensimini ka esiqiwini ikhula mayelana 1,200 zama-flora, abantu abangaphezu kuka-200 zama-ezilwaneni ezinomgogodla. Inani elikhulu kukhona beech, yebo isihlekehleke somuthi, futhi-ke, hornbeam amahlathi. Ziyakwazi ngaphansi ukuvikelwa ngokukhethekile.
Esiqiwini bahlala ezinjalo izilwane esiyingqayizivele like YaseCrimea inyamazane obomvu, mouflon futhi Roe izinyamazane nezinye Crimean ezingavamile kakhulu izilwane Peninsula. futhi wamisa okuthiwa izindlela imvelo yokuhamba lapho amaqembu izivakashi banethuba eliyingqayizivele ukuba bajwayelane yonke ingcebo yemvelo.
Kuyaphawuleka ukuthi Chatyrdag wahlomisa ngokukhethekile emhumeni, okuyinto usuvulekile umphakathi wonke comers. Igqoka igama kumnandi - Marble. Futhi eseduze kuyinto igatsha elimangalisayo esiqiwini - Swan Islands. Lapha-ke mkhulu kakhulu lonke eziseMpumalanga Yurophu yinhlanganisela Waterfowl. Inani zezinyoni baphile lapha - 265. Kuyaphawuleka ukuthi u-18 babo yabalwa Incwadi Red!
Manje ngoba sewuyazi ukuthi incazelo esiqondile elithi "reserve" evikelwe endaweni, njll Into esemqoka - .. Vikela imvelo! Angithi ukuze ulondoloze yakhe okwamanje kungenzeka, futhi kufanele wenze lokhu ngoba konke okusemandleni akho. izizukulwane zethu esikhathini esizayo kungaba usabona ukuthi kuze sibona wena. Awu, lokho ukudala izinqolobane, ezweni lapho ukuthi akuphi, bayakwazi ukulondoloza.
Indlela okwesabisa izinyoni kusukela cherry: izindlela eziphumelelayo ikakhulukazi kanye nezincomo
Giant izicabucabu - eqanjiwe noma iqiniso zokuphila?
Yefilakisi (isitshalo): incazelo izakhiwo ewusizo futhi izicelo
Futhi niyazi ukuthi massage nge amawolintshi elishisayo?
Indlela yokwenza chess ngezandla zakhe?